Liverpool oo guul weyn Arsenal kaga soo gaartay Emirates xilli Diogo Jota uu noqday furaha guusha – Gool FM
(London) 03 Abril 2021. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa garoonkeeda guuldarro culus kagala kulantay naadiga Liverpool kulan xiiso badan oo labada koox ku dhex maray horyaalka Premier League.
Qaybta hore ee ciyaarta ayaa kusoo dhammaatay barbarro goolal la’aan ah iyadoo kulanku uu u muuqday mid dagan marka laga cabir qaato dhanka weerarrada.
Balse markii dib la isugu soo laabtay ayay Liverpool garoonka lasoo gashay dardar xooggan sidoo kalena sameysay isku dayo dhowr ah.
Tababare Jurgen Klopp ayaa baddel ku keennay Diogo Jota isagoo ciyaarta markaas ka saaray Andrew Robertson, waxaana weeraryahanka reer Portugal ee baddelka kusoo galay uu hoggaanka u dhiibay Reds isagoo ka dhigay 1-0 daqiiqaddii 64-aad ee ciyaarta.
Arsenal ayaa u babac dhigi weysey weerarrada is daba joogga ah ee ay wajaheysay, waxaana goolkii labaad ka dhaliyay Mohamed Salah oo 2-0 ciyaarta ka dhigay daqiiqaddii 68-aad.
Liverpool oo ciyaarta dhan walba ka maamulaneysay ayaa dhalisay goolkeedii saddexaad daqiiqaddii 82-aad ee ciyaarta iyadoo mar kale uu shabaqa gaaray Diogo Jota oo caawa ahaa furaha guusha ee xiddigaha Jurgen Klopp.
Horudhac: Manchester United vs Brighton & Hove Albion... (Red Devils oo doonaysa inay caawa jawaab ka bixiso niyad-jabkii ka soo gaaray FA Cup-ka)